ရန်ကုန်မြို့လယ် မြင်ကွင်းကို အပေါ်စီးမှ ရှုမြင်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရန်ကုန်မြို့လယ် မြင်ကွင်းကို အပေါ်စီးမှ ရှုမြင်ခြင်း
ရန်ကုန်မြို့လယ် မြင်ကွင်းကို အပေါ်စီးမှ ရှုမြင်ခြင်း
Posted by manawphyulay on Sep 14, 2011 in Photography, Travel | 17 comments
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကို အပေါ်စီးမှ ကြည့်ရှုခြင်း
ရန်ကုန်မြို့လယ်မြင်ကွင်း အပေါ်စီးမှ မြင်ရပုံ
maung hninkharr says:
Trader Hotel အပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာလား။
ကောင်းကင်ပေါ်က မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်…..။
အပေါ်စီးကကြည့်ရတာ နဲနဲတော့ ညစ်ထေးထေး ဖြစ်နေသလိုမို့ ကြည့်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူးထင်ရတယ်…။
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကို အပေါ်စီးက ရိုက်ပြထားတာ အမြင်တမျိုးဆန်းသွားတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ မနော ရယ်။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ကောင်းလိုက်တဲ့မြင်ကွင်း ထရိတ်ဒါး ဟော်တယ်ပေါ်က
ခေါင်မိုးလေးတွေ ညစ်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကိုက မြို့တမြို့ရဲ့ သီးသန့် ပြယုဒ်ကို ပေးနေသလိုပဲ ရသမြောက်တယ်
တောင်ကြီး မြို့ ကိုရွှေဘုန်းပွင့်တောင်ပေါ်ကကြည့်ရင်ဒီထက်ပိုလှပါတယ်။မြို့ တော်ရန်ကုန်ကတော့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ကိုလှပါတယ်။
ညစ်ပါတ် သံချေးရောင်ထနေတာပြခြင်တာလား ။
ပုံပြင်လေး သတိရတယ်။ ကြားဘူးကြမှာပါ။
အာဖရိက နိုင်ငံက သမတ ၊ ဒီက သမတ ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ခမ်းနားတဲ့ သူ့နန်းတော်ကိုခေါ်ကြွားပါတယ်။ နောက်သူ့နန်းတော်ပြူတင်းပေါက် ကနေ သူ့မြို့ကိုခေါ်ပြပြီး ဒီမြို့ဆောက်တဲ့ငွေကနေ ၂၀% လောက် ယူပြီးသူ့နန်းတော်ဆောက်ထားကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒီက သမတ ကပြန်ဖိတ်ပြီး သူ့ရဲ့ အဆမတန်ပိုခမ်းနားတဲ့ နန်းတော်ကိုပြန်ပြပြီး ကြွားပါတယ်။ အာဖရိက နိုင်ငံက သမတ က ဒီနန်းတော်ကြီး ဒီလောက်ခမ်းနားရင် သူ့မြို့တော်လည်းတော်တော်ခမ်းနားမှာ ဘဲလို့တွေးနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ဒီက သမတ က သူ့ပြူတင်းပေါက်ကနေ ဖွင့်ပြလိုက်တော့ အာဖရိက နိုင်ငံက သမတ ဟာကနဲဖြစ်သွားပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့နီးတဲ့.. ဘန်ကောက်..စင်္ကာပူ.. နှစ်တွေခြားပြီး ပြန်ရောက်သွားရင်.. မြို့ရဲ့.. တိုက်တာ..လမ်းပန်း..အပြောင်းအလဲတွေကြောင့်.. အံ့သြရတယ်..။ ဘန်ကောက်ဆိုကြည့်ရင်းနဲ့တင်.. မိုးပျံတံတားတွေပေါ်လာတာပဲ..။ စင်္ကာပူလည်း မျက်စိရှေ့တင် အင်မတန်ကြိးပွားစည်ပင်လာတာပဲ..။
ဆရာချစ်စံဝင်း.. ဘန်ကောက်ရောက်တော့ ..ဘန်ကောက်မြို့ကိုအပေါ်စီးက လှမ်းမြင်ရတဲ့..ဟော်တယ်ခန်းမှာတည်းတယ်တဲ့..။ အဲဒီကနေ.. ဘန်ကောက်မြို့ကြီးကို ဟိုတယ်ခန်းက.. လိုက်ကာဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီး.. မြင်ရတော့.. သူက..ရေးတယ်..။ “ကျွန်တော်ငိုမိပါသည်..”တဲ့..။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တိုးတက်လာတဲ့ မြင်ကွင်း ပြယုဒ်တစ်ခုကို ကြည့်လိုက်မိရင် ဘယ်လိုအနေအထား ဘယ်လိုအခြေလဲဆိုတာ သိသာမြင်သာပါတယ်။ ဒါတောင် လူချမ်းသာတွေ အများဆုံးနေနိုင်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့လယ်ရဲ့မြင်ကွင်းပဲရှိပါသေးတယ်။ ချောင်ကြတဲ့ မြို့၊ ရပ်ကွက်တွေကိုသာ ကြည့်မြင်မိရင် ပိုပြီး ရင်နာစရာကောင်းနေမယ်လို့ မခံစားမိဘူးလား။ ဒီလိုနေရာမှာတောင် ဒီလိုအနေအထားဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့နေရာတွေတော့ မပြောပါနဲ့တော့လေ… အရမ်းခံစားရပါတယ်။ ဆရာ အော်ပီကျယ် အင်းစိန်မှာ ဟောပြောပွဲလာတုန်းက ပြောသလို ပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ က ဒီနေရာကို ရောက်တော့ မီးခွက်ကလေးတွေ မှိတ်တုတ်တုတ်နဲ့ ဟော ခုတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်မှာ တစ်ဖန် ပြန်ရောက်လာတော့ ဒီနေရာမှာ မှိတ်တုတ်တုတ်ပဲ ရှိနေသေးပါလား(ဟောပြောနေချိန်မှာ မီးပျက်နေသည်) တဲ့လေ…. ပြောရရင် ကိုယ်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းသလို ဖြစ်နေပါမယ်လေ…. :
ချောင်ကျတဲ့ရပ်ကွက်ကို ကြည့်ချင်သလား စုတ်ပြဲ နှုံချာနေတဲ့ နေရာကို ဆေးခန်းသွားရင်း ညနေ့တိုင်း ဖြတ်သန်းနေရတယ်… ဓါတ်ပုံရိုက်လျှင် ၀ိုင်းရိုက်ကြမှာစိုးလို့ ငြိမ်နေတာ
လမ်းတကာ့လမ်းထဲမှာ အဲ့ဒီလမ်းက အဆိုးဆုံးပဲ .. ကလေးတွေဆို ညစ်ပတ် ငိုယိုလုိ့နှပ်ချေးတွဲလောင်း … မိဘတွေကလည်း တစ်ခါတစ်လေ ဖိနပ်မပါပဲ လျှောက်ချင်လျှောက် .. ထမင်းစားလျှင် ပန်းကန်ဆွဲပြီး အိမ်ရှေ့လမ်းမထွက်စားလိုစားနဲ့ .. တကယ့်ကို စရိုက်ပဲ မြင်ရတာ မကောင်းဘူး ..။ စေတနာအများကြီးထားပြီး လုပ်ပေးနေတဲ့ အလုပ်တောင် … ရပ်ပစ်လိုက်ချင်ပြီ … ။
မနောလို ထရေးဒါးဟိုတယ်လို ဇိမ်ခံအထပ်မြင့် အဆောက်အဦးကြီး အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ နေနိုင်တဲ့သူနဲ့ သိကျွမ်းရတာ ဂုဏ်ယူမဆုံးပါဘူး။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားရင် ကြောင်ကြီးကို မမေ့နဲ့နော်။
“ဒါနဲ့ဒီက သမတ က သူ့ပြူတင်းပေါက်ကနေ ဖွင့်ပြလိုက်တော့ အာဖရိက နိုင်ငံက သမတ ဟာကနဲဖြစ်သွားပါတယ်။”
ထရိတ်ဒါး ဟိုတယ်အပေါ်ထပ် ဆယ့်ခြောက်လွှာ ၊ ဆယ့်ခုနှစ်လွှာလောက်ကနေရိုက်တာမို့လား … အခန်းထဲကရိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး ..အခန်းတွေရှေ့က ဖြတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ … ဘေးလူသွားလမ်းပြတင်းပေါက်ကနေရိုက်တာလို့ ထင်တာပဲနော် … ။
ရွှေတိဂုံ ဘုရားလည်း မြင်ရတယ်
အဲဒါက မြိ့တော်ကိုဒီထက် လှပသွားအောင် တာဝန်သိသူအနေနဲ့ or ငွေကြေးပေါများသူတွေအနေနဲ့ ညစ်ထေးနေတဲ့ အမိုးတွေကို ရောင်စုံအသစ်တွေနဲ့ပြောင်းပေးရင် international အလှဖြစ်ဖို့ ပိုသေချာတာပေါ့နော်။
တစ်ချိန်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ အလှဆုံးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပါလားနော်